Nhau - IC inodzosera kumashure uye chip kodhi yekodhi
IC inoshandura uye chip kodhi kodhi
Mune iyo IC inodzosera kumashure uye chip's kodhi kuburitsa, Shenzhen Sichi Technology Co LTD. kupa zvinotevera:
IC muchinjiko chikamu kuongorora
Mune iyo chip reverse engineering, mambure rondedzero / wedunhu dhizaini dhizaini rakakosha basa. Net runyorwa rwekuburitsa mhando uye nekumhanyisa zvinokanganisa iko kwekupedzisira kupedzisa, kuenzanisa uye LVS uye zvimwe zvinhu zvebasa. Sichi Technology mukutsvagisa kwenguva refu kwehunyanzvi yakabudirira kupfupisa seti yemaitiro anoshanda uye nzira, yemhando yepamusoro-inomhanyisa dhizaini yemhando dzakasiyana dzedunhu mambure rondedzero.
Iine FIB mune iyo IC chip yakatarwa nzvimbo yechikamu chemuchinjikwa-chikamu, muchinjiko-chikamu chechimiro chemidziyo uye zvinhu, yakagadziriswa-poindi yekuongorora chip chimiro zvirema. Izvi zvinogona kubatsira IC vagadziri kuIC dhizaini yekuita ongororo.
Kuongorora kweineti rondedzero / wedunhu dhayagiramu kubviswa uye logic basa
Dhizaini dhizaini iko iko kuita kwechokwadi kwedunhu kufunga, ndiko kuzadzikiswa kweakaunganidzwa edunhu zvigadzirwa. Sichi Technology mune yakasarudzika dhizaini pane hwaro hwekugadzwa kwekuburitsa, kugadzirisa raibhurari kutsiva, tarisiro maitiro shanduko, DRC kuongorora uye LVS calibration uye mamwe magadzirirwo masevhisi.
Shandisa iyo FBI kugadzirisa iyo IC mutsetse
Iko kushandurwa kwemuviri wedunhu chip neFIB inobvumira iyo chip dhizaina kuyedza chip chip kukurumidza uye nekururamisa kwakaringana kwekugadzirwa. Kana paine dambudziko nenzvimbo yechip, inogona kusarudzika kana kugadziriswa neFIB Iyi nharaunda maficha kuitira kuti uwane crux yedambudziko. FIB zvakare mune yekupedzisira chigadzirwa kugadzirwa kusati kwapihwa mamwe masampula uye enjiniya mafirimu, iyo kushandiswa kwesampuli uku kunogona kumhanyisa mwaka wekupedzisira chigadzirwa kumusika. Uchishandisa FIB kugadzirisa chip inogona kudzikisa huwandu hwesina kubudirira dhizaini shanduko, Pfupisa nguva yekuvandudza uye kutenderera. Kuti chip ibvise mutengi, unogona kugadzirisa mutsetse kuti uwane kuzadzikiswa.
Pane iyo microcontroller, CPLD, FPGA uye kumwe kuongorora uye kuchengetedza kuongorora.
Pane iyo microcontroller uye CPLD uye FPGA machipisi senge kuongorora uye kuyedza, kudzoreredza kodhi kodhi uye chengetedzo yekushomeka kwekuyedza kuongorora.
Inonzwisisika basa rekuongorora
Mushure mekupera kweineti rondedzero kuburitswa, kazhinji inoda kuita yekupedzisa basa redunhu, rakatetepa redunhu kugadzirisa kuumbwa kwedunhu reiyo hierarchical chimiro kuti unzwisise dhizaina dhizaini dhizaini nemaitiro, asi zvakare ku tsvaga iyo mambure runyorwa Chakashata chinangwa. Sichi Technology kuburikidza nedunhu rematanho akasiyanasiyana eiyo module kupedzisa uye kuongorora, kwete chete inogona kunyatsonzwisisa dhizaini dhizaini dhizaini mazano uye hunyanzvi hwekugadzira, asi zvakare mukuwongorora uye kupfupisa kwepamberi dhizaini mazano zvichienderana nekuzadzikiswa kwavo vega dhizaini .
Parizvino, nekuda kwekutsvagurudzwa kwemumba mumunda weanalogy yakasanganiswa wedunhu dhizaini haina kusimba, chip reverse ongororo yakave ruzhinji rweanogadzira akasanganiswa enjiniya akavakirwa pane chaiyo simulation wedunhu kuunganidza ruzivo nenzira inoshanda, IC reverse dhizaini ine kuve kukurudzirwa kwemukati wedunhu dhizaini dhizaini uye inoshanda nzira.